Vidiyo: nka nke ihe ngosi ihe omimi | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 29, 2014 Wenezdee, Jenụwarị 29, 2014 Douglas Karr
Ka anyị na-arụ ọrụ na data na nnukwu data set na ndị ahịa, anyị na-achọpụta na data na-adị nnọọ ize ndụ mgbe a kọwaara ya ma ọ bụ ghara ịkọwa ya. Ndị na-ere ahịa mgbe ụfọdụ na-eji elele nke a iji gbagọọ nkọwa ahụ maka elele ndị ahịa. Nke a dị nwute n’ihi na ọ nwere ike ibute atụmanya efu. Atlele data nwere ike iduhie, mana data ịlele anya nwere ike ịkọ.
Mgbe anyị na-eji infographics na-arụ ọrụ, usoro nke iji gosipụta ihe ngosi ga-abụ site na akụkọ sara mbara ruo na ozi ejedebe nke na-akwado akụkọ ahụ. Nhazi bụ ihe na-eweta akụkọ na data ọnụ iji kwusaa ozi ahụ nke ọma. Anyị na-ebido nyocha na imewe n'otu oge ka anyị ghara ikwe ka data ahụ karịrị ma ọ bụ mebie akụkọ ahụ dum. Ekwenyere m na ọtụtụ atụmatụ ihe ọmụma na-amalite site na data buru ibu ma na-agbanye ya na mma mara mma. Stats dị ukwuu, mana akụkọ ahụ dị mkpa karịa stats!
Nke a bụ obere dị mkpirikpi site na PBS na nyocha data:
Tags: Ịhụ ihu igwe